के मान्छे बाँदरबाट आएको हो? – Word of Truth, Nepal
विकासवादी सिद्धान्तको विरुद्धमा विज्ञान
विज्ञानअनुसार? उनीहरूको भनाइ वास्तवमा “क्रमविकासवाद अनुसार” मात्र हो, विज्ञानअनुसार होइन। निर्जीवबाट जीवको उत्पत्ति भएको एउटै प्रमाण छैन, त्यो परिकल्पनामै सीमित छ। वास्तवमा क्रमविकासवाद र विज्ञान आपसमा मिल्दैनन्।
जीवशास्त्र विज्ञानको एउटा नियमलाई जीवजनन्‌को नियम अथवा ‘ल अफ बायोजेनेसिस्’1 भनिन्छ। यस नियमले दुइटा कुरा विश्वव्यापी रूपमा स्थापित भएको कुरा बताउँछ: (१) एउटा जीवको उत्पत्ति अर्को जीवबाट मात्र हुन सक्छ। (२) एक प्रकारको जीवको उत्पत्ति त्यही प्रकारको जीवबाट मात्र हुन सक्छ।
तर क्रमविकासवादले बिनाप्रमाण यसको ठिक उल्टो कुराको दाबी गर्दछ (१) निर्जीव रासायनिक तत्त्वहरू मिल्न गई एक-कोषीय जीवको उत्पत्ति भएको दाबी। (२) उक्त एक-कोषीय जीव (एक प्रकारको जीव) को क्रमिक विकासबाट पृथ्वीका सबै प्राणीहरू (अर्कै प्रकारका जीवहरू) उत्पन्न भएको दाबी।
तर वास्तविकता के छ भने, नता रासायनिक तत्त्वबाट जीव उत्पन्न हुन सक्छ भन्ने प्रमाण भेटिएको छ, नता एक प्रकारको जीवबाट अर्को प्रकारको जीवको उत्पत्ति भएको प्रमाण छ।
चार्ल्स डार्विन (सन् १८०९-१८८२) ले क्रमविकासवादको यो अवैज्ञानिक धारणालाई “अन दि ओरिजिन अफ स्पिसिज” शीर्षक गरेको आफ्नो पुस्तकमा प्रकाशित गरेको लगभग १६० वर्ष अगाडि हो। त्यसबेला यो विश्वास गरिन्थ्यो कि कुनै पनि एक-कोषीय जीव एउटा ज्यादै सरल रासायनिक संरचना हुनुपर्छ। डार्विनलाई जर्मनीमा लोकप्रिय बनाइदिने अर्न्स्ट हेकलले यो दाबी गरे कि एउटा कोष भनेको ‘कार्बनको अल्बुमीनयुक्त मिश्रणको सरल पिण्ड हो।’ तर उन्नाइसौं शताब्दीदेखि यता जीव कोष भन्ने कुरा वास्तवमा अत्यन्तै जटिल बनौटका हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा थाह हुन आयो।
“आधुनिक मान्छे आफू बुद्धिमान् छु भन्ने दाबी गर्दै वास्तवमा मूर्ख बनेको कुराको उदाहरणस्वरूप सेप्टेम्बर १९७६ को नेशनल जिओग्राफिक पत्रिकाको “कोषभित्रका अचम्मका संसारहरू” भन्ने लेखलाई लिन सकिन्छ। पृष्ठ ३५८ मा लेखकहरूले कोषको अत्यन्तै जटिल बनावटको वर्णन गर्दछन्। वास्तवमा “सरल एक-कोषीय जीव” भन्ने त्यस्तो कुनै कुरा छैन! सबैभन्दा सरल कोष समेत एउटा “माइक्रो संसार” पो रहेछ (पृष्ठ ३५८)। अनि पृष्ठ ३८८ मा हामी पढ्छौं, “…यो नै जीवशास्त्रको प्रमुख समस्या हो। यस्तो जटिलपना कसरी हुन आयो?…जीवशास्त्रीहरूले विज्ञानको यस गहिरो, आधारभूत रहस्यलाई अझसम्म बुझ्न सकेका छैनन् अर्थात् यी सब कुराको सुरु कसरी भयो?” त्यसपछि पृष्ठ ३९० मा “विज्ञहरू” ले यसको जवाफ दिँदै पर्याप्‍त समय दिइयो भने असम्भव पनि सम्भव हुन्छ भन्दै सबै कुराको श्रेय सञ्जोगलाई दिन्छन्! समय, सन्जोग र क्रमविकासवाद भए भने सबै कुरा सम्भव हुन्छन् अरे!” (जर्ज जेलर, रोमीको टिप्पणी)। सृष्टिकर्ताको अस्तित्वलाई इन्कार गर्नेलाई क्रमविकासवाद बाहेक अर्को विकल्प नभएर यस्तो अवैज्ञानिक अभिव्यक्ति आएको हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। क्रमविकासवाद वास्तवमा विज्ञान नभएर केवल एउटा भौतिकवादी अवधारणा हो।
कोषको जटिलताको सानो झलक निम्न भिडियोमा प्रस्तुत छ। अमेरिकाको हार्वड विश्वविद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीलाई कोषभित्रको जीवन थ्रीडीमा देखाउन तयार गरेको भिडियो हो यो। यस भिडियोमा मानव शरीरको रक्तनलीभित्र एउटा श्वेत रक्तकोष इन्फ्लामेशनद्वारा क्रियाशिल बनाइँदा कैयौं आणविक क्रियाविधि सक्रिय बनेको देखाइएको छ (शरीरमा चोटपटक लागेर तन्तु सुन्निने कार्यलाई इन्फ्लामेशन (inflammation) भनिन्छ)। “यस भिडियोमा शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीको भूमिका निभाउँदै एउटा श्वेत रक्तकोष रक्तनलीको भित्री सतहमाथि गुड्दै गएको र त्यो चेप्टो बनेर रक्तकेशिकाका कोषहरूको बीचबाट छिरेर इन्फ्लामेशनको स्थानमा पुगेको देखाइएको छ।” (विकिपिडिया)।
सृष्टिले यो देखाइरहेको छ कि सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। कम्प्यूटर बनाउन कम्प्यूटर इञ्जिनियर चाहिन्छ। तर कम्प्यूटरको जटिलता एउटा कोषको जटिलताको तुलनामा नगन्य छ। १६० वर्ष अगाडि डार्विनले कोष रासायनिक मिलनद्वारा आफसेआफ बन्न सक्छ भनेर अड्कल काटे। तर अब त कसैलाई बहाना छैन। हुन त कसैलाई कहिल्यै बहाना छैन किनकि यस्तो लेखिएको छ, “किनकि संसारको उत्पत्तिदेखि नै उहाँका नदेखिने गुणहरू अर्थात् उहाँका अनन्त शक्ति र परमेश्वरत्व छर्लङ्ग देखा परेका छन् — सृष्टि गरिएका कुराहरूद्वारा जानिएका छन्; यसकारण तिनीहरूसँग कुनै बहाना छैन” (रोमी १:२०)।
अप्रमाणित कुरो विज्ञान होइन। विज्ञान भनेको भौतिक संसार सम्बन्धी प्रमाणित ज्ञान हो। तर क्रमविकासवाद संसारको उत्पत्ति सम्बन्धी एउटा काल्पनिक धारणा मात्र हो। यसलाई विज्ञानको परिभाषाअनुसारको “थियरी” वा वैज्ञानिक सिद्धान्त समेत मान्न सकिन्न किनकि यसलाई वैज्ञानिक तवरले प्रयोगशालामा जाँच्न सकिने कुनै उपाय छैन। उन्नाइसौं शताब्दीका चार्ल्स डार्विनद्वारा प्रतिपादित क्रमविकासवाद वैज्ञानिक प्रणाली2 द्वारा कहिल्यै प्रमाणित भएको छैन।
विज्ञानको मूल आधार अवलोकन हो। उत्पत्तिको प्रारम्भमा मान्छे थिएन, उसले अवलोकन गर्न सक्ने कुरै भएन। त्यसैले उत्पत्ति सम्बन्धी पक्का सत्य-तथ्य ज्ञान विज्ञानको पहुँचभन्दा बाहिर छ।
सृष्टिको प्रारम्भमा केवल अनादिदेखिका त्रिएक सृष्टिकर्ता परमेश्वर मात्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मात्र हामीलाई सृष्टिको उत्पत्ति सम्बन्धी सत्य-तथ्य कुराहरू बताउन सक्नुहुन्छ। अर्थात् मानिसले सृष्टिको बारेमा जान्ने हो भने उसलाई सृष्टकर्ता स्वयंले विशेष प्रकाश प्रदान गर्नु आवश्यक छ। ठिक यही कुरा उहाँले आफ्‍नो एकमात्र लिखित प्रकाश बाइबलद्वारा संसारलाई दिनुभएको छ। बाइबलमा बताइएका कुरा विज्ञानसँग बेमेल छैनन्। किनकि दुवै बाइबल र विश्व-ब्रह्माण्ड सृष्टिकर्ताकै रचना हुन्। बाइबल वैज्ञानिक तवरले अचूक छ भन्ने कुराका केही प्रमाणहरूका लागि पढ्नुहोस्: बाइबलको प्रमाण।
चाहे इतिहासको बारेमा होस्, चाहे विज्ञानको बारेमा, हाम्रो निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्टको वचन आधिकारिक हुन्छ। जो मृत्युबाट बौरेर उठ्नुभयो र जसले भन्नुभएका एक-एक वचन पूरा भए र साथै उहाँको सम्बन्धमा भविष्यवाणी गरिएका एक-एक कुरा उहाँको जीवनमा पूरा भए, उहाँलाई विश्वास नगरीकन अरू कसलाई विश्वास गर्ने? एउटा वैज्ञानिकलाई वा विद्वानलाई? एउटा साँचो ख्रीष्टियनले त्यसो गर्न सक्दैन, मिल्दैन। मानिस भनेको केवल मरिजाने नाकमा सास भएको प्राणी मात्र हो, चाहे ऊ वैज्ञानिक होस् वा जोसुकै होस्। प्रभु येशू ख्रीष्ट मृत्युबाट वास्तवमै बौरेर उठ्नुभयो र सदासर्वदा जीवित हुनुहुन्छ। उहाँले सृष्टिको सम्बन्धमा जे भन्नुहुन्छ त्यही कुरा नै हामी विश्वास गर्दछौं।
बाइबलको सृष्टिको वृत्तान्त पूरै सत्य भएको कुरा उहाँले प्रस्टै जनाउनुभयो, “के तिमीहरूले पढेका छैनौ? शुरुमा जसले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो, उहाँले तिनीहरूलाई नर र नारी बनाउनुभयो” (मत्ती १९:४)।
“के तिमीहरूले पढेका छैनौ?” भन्ने प्रश्न सोध्नुहुँदै उहाँले उत्पत्तिको पुस्तक वास्तविक इतिहासको पुस्तक हो भनेर यहाँ समर्थन गर्नुभयो। “शुरुमा” भन्नुहुँदै उहाँले सृष्टिको शुरुको वास्तविक बयान उत्पत्तिको पुस्तकले बताउँछ कुराको समर्थन गर्नुभयो। अनि “नर र नारी बनाउनुभयो” भन्नुहुँदै उहाँले आदम र हव्वा वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्तिहरू थिए र सम्पूर्ण मानवजाति कुनै बाँदरबाट नभएर आदम र हव्वाबाट आएका हुन् भनेर प्रस्टै सिकाउनुभयो।
यस वेबसाइटमा क्रम-विकासवाद र बाइबल सम्बन्धी अर्को पृष्ठ यहाँ छ: क्रम-विकासवाद
Henry Morris, Ph.D., The Scientific Case Against Evolution: A Summary Part 1, http://www.icr.org/article/
Revised and expanded: June 21, 2020
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-03-01 17:14:072020-06-21 19:23:27के मान्छे बाँदरबाट आएको हो?
पैसा! पैसा! बताउन मन रमाउँछ